Ny tadin'ny tombo-kase vita amin'ny kodiarana dia ampiasaina amin'ny lalimoara sy milina. Ny akora famokarana lehibe indrindra dia ny EPDM, PVC, rubber nitrile ary ny silika vita amin'ny silipo. Mainly milalao ny anjara asan'ny fanamboarana, insulate feo, tantera-drano, vovoka, porofon'ny bibikely sy famehezana.
Ny kofehy famehezana dia vokatra izay manisy tombo-kase karazana zavatra ary mahatonga azy io tsy ho mora vohaina. Izy io dia mitana andraikitra amin'ny fidirana amin'ny hatairana, tsy tantera-drano, fanamafisam-peo, fanamafisana ny hafanana, fisorohana vovoka, ary koa manana elastika lehibe, androm-piainana maharitra, fanoherana ny vidiny mifaninana. Ny fantsonay tombokase dia afaka mamaly ny fangatahanao sy ny volavolanao.
Ny orinasanay dia mandray ny tsipika famokarana mandroso, mampiasa akora manta avy any USA, Netherland, Korea ary Allemana, famolavolana rubber tsy manam-paharoa, mikendry ny hanome vokatra tsara, vidiny ambany. Vonona izahay hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao mba hiara-mamorona ho avy mamiratra.
Ny fehin-kibo vita amin'ny vovoka dia manana fitaovana hafa. Ny ampiasaina matetika dia EPDM. Ny orinasan-tsika dia manome kofehy famehezana tsy adhesive avo lenta, izay mety amin'ny karazana varavarana sy varavarankely isan-karazany, toy ny varavarana hazo, varavarana vy-plastika, varavarana fiarovana, vavahady mihetsika, varavarana misosa, varavarana fiara sns. manana katalaogy saika tsy manam-petra amin'ny voapaika esory sy sombin-kazo, ao anatin'izany ny ankamaroan'ny naoty ara-barotra sy ny mari-pahaizana manokana momba ny BS, ny roboka manampahaizana sy ny fenitra anisan'izany ny Viton, Neoprene, Nitrile, Silicone, EPDM, spaonjy ary foam. Ny haben'ny habenay dia midadasika ary afaka manapaka ny habeny isaky ny baiko izay tiana isika. Raha manana fepetra takiana manokana ianao, mifandraisa aminay.
Sombom-bary vita amin'ny satroka vita amin'ny fantsom-paty
Ny orinasan-tsika dia manome kofehy famehezana tsy adhesive avo lenta, izay mety amin'ny karazany isan-karazany amin'ny varavarana sy varavarankely, toy ny varavarana hazo, varavarana vy-plastika, vavahady fiarovana, vavahady mihetsika, varavarana misosa, varavarana fiara sns. ampiasaina amin'ny fitaovana ao an-trano, trano fandraisam-bahiny, hopitaly, fananganana orinasa, tetik'asa madio ary toeram-pivarotana lehibe sns. Ny fantson-tsolika notapahina dia mitovy habe amin'ny 6mm ka hatramin'ny 500mm ny sakany ary misy hatevin'ny 1.5mm ka hatramin'ny 15mm. Ny karazana fehikibo vita amin'ny fingotra rehetra dia samy manana ny hateviny sy ny sakany, azafady mba mifandraisa aminay raha tsy hitanao ny habeny ilainao. Ny fehin-kibo vita amin'ny vovoka dia vita amin'ny fitaovana PE sy PU, mahazaka ranomaso, fikorontanana ambany ary maharitra ampiasaina. manana karazana karazany amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra ary miaraka amin'ny kasety adiresy tsara kalitao 3M.